Afar qof oo ku dhintay biyo xidheen ay sawir isaga qaadayeen - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaAfar qof oo ku dhintay biyo xidheen ay sawir isaga qaadayeen
Afar qof oo ku dhintay biyo xidheen ay sawir isaga qaadayeen
Haweeney dhawaan la guursaday iyo saddex qof oo ka tirsan qoyskeeda ayaa ku qaraqmay biyo xireen ay isku sawirayeen, sida uu sheegay booliska gobolka Tamil Nadu ee koonfurta Hindiya.
Dadka dhintay ayaa kamid ahaa koox lix qof ka kooban oo gacmaha is haystay, isla markaana taagnaa meel biyuhu ku yar yihiin, ka hor inta aanu mid ka mid ah ku fakan moolka biyo xireenka deetana jiidan inta kale.
Ninka qabay xaaska dhimatay ayaa waxaa u suuragashay inuu badbaadiyo walaashii oo kamid ahayd dadka ay biyaha qaadeen.
Hindiya ayaa ah dalka ugu badan ee la xaqiijiyay inay ku dhintaan dadka sababsada sawiradda la iska qaado ee selfie loo yaqaano.
Sida ay sheegtay hay’ad fadhigeedu yahay Maraykanka, 259 oo qof ayaa Hindiya ugu dhintay xilli ay sawirrada selfie iska qaadayeen mudadii u dhexeysay 2011 iyo 2017. Dalalka kusoo xiga ayaa kala ah Ruushka, Maraykanka iyo Pakistan.
Khubarada ayaa sheegaya in dadka sawiradda iska qaada ay khatar weyn u bareeraan si ay u farxad geliyaan qoysaskooda iyo asxaabtooda ku taxan baraha bulshada.
Gobolka Haryana ee Hindiya ayaa bishii May waxa si xun uu tareen ugu jiiray saddex dhalinyaro ah oo sawir selfie ah ku galayay wadada tareenka.
Sanadkii 2017 ayaa gobolka Karnataka waxa uu billaabay olole dadka loogu digayo oo loogu magac daray “selfie-gu waa uu ku dili karaa” kadib markii ay sawirrada noocaasi ah galaafteen noolasha afar arday.
Donald Trump Oo Ku Hanjabay Inuu Burburin Doono Dhaqaalaha Dalka Turkiga